Soomaali - Stenungsunds kommun Gå direkt till innehållet
| Svenska för invandrare (SFI)
SFI- Waxbarashada luqada Swedishka ee loogu talo galay Galootiga
Aqoonta luqada Swedishka waxay sharad u tahay gelista suuqa shaqada iyo dhaxgalka bulshada Swedhiska. Kommunka wuxuu masuul kayahay barida luqada Swedhiska oo loogu talo galay soo gelootiga. Xiliga dhow waxaa goosha ay tahay aradayda wax baraneeso in ay fahmi karaan iyo in lafahmi karo marwaxada kale duwan ee nolol maalmeedka ee Sweden iyo aqoonta asaaska ee bulshada Swedishka, shaqada iyo dhaqanka Swedishka.
Sida loo dalbado SFI
Waxaad ka dalban karta SFI in aad buuxiso boga-internetka oo aad ka halayso inta! Öppnas i nytt fönster.
Waxaa dheeraad kuu ah ama aad ku qasbantahay in aad samaysato xasho cadeyn ah oo aad ka soo hayada canshuurta (Skatteverket) oo ujeedo oo tusayso in aad ka diiwaan gashantahay Sweden. Warqada cadayntaqofka waxaad ka dalban kartaa inta! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Marka dhalbashada laga ogalaado waxaa kula xili gaaban kudu hooda waxaa kula soo xiriiri doona Vuxenutbildning i Stenungsund si laguu siiyo warbixin ku saabsan koorsada iyo/ama lagu qabto waqti warbixin waxbarasho.
Warbixin iyo sharciyo
Waad soo dalban karta SFI kabilabato iyo kalabar taariix jadwaleedka sanadka aad buuxinayso 16 sano.
Marka kugu horays ee aad dalbato SFI oo aad buuxiso shuruudaha la isku qaato boos ayaad halaysa mudo sadax bilood guduhooda ah.
Hadii aad katimid meel kabaxsan yurup:
Waa inaad haysata 10 ka lambar ee cadaynaysa dhalashada qofka.
Waa in aad ka diiwaan galsantahay Stenungsund. Hadii aad ka diiwaan galsantahay dagmo kale, waa in uu xafada aad katirsantahay in marka hore ay kuu soo ogalaadan in aad SFI ku barto Stenungsund.
Hadii aad ka imaatay wadamo katirsan Yurup ama aad sharci kuleedahay Iswiserland:
Waa in aad ku nooshahay Stenungsund. Hadii aad ku nooshahay xafad aan ahayn Stenungsund waa in uu degmada aad ka tirsan tahay ay kuu soo ogalata in aad SFI ku aqrisato Stenungsund.